किन छैनन् नेपाली फिल्ममा दर्शक ? – Mero Film
किन छैनन् नेपाली फिल्ममा दर्शक ?
५१ वर्ष लामो इतिहास, नेपाली फिल्मले धेरै फड्को मारेको छ । सुरुवाती दिनमा फिल्म निर्माण कम हुन्थे । अहिले फिल्म निर्माणको क्रम बढेको छ । यस क्षेत्रलाई बुझेर वा अध्ययन गरेको आउने निर्माता, निर्देशक तथा कलाकारको मात्रा बढेको छ । जसले गर्दा फिल्म निर्माणमा ‘क्वालिटी’ बढेको छ । फिल्म मेकिङले जनमानसमा छाप छाड्न थालेको छ ।
प्रविधि र लोकेशनको हिसावमा नेपाली फिल्मले फड्को मारेको छ । नेपालमा मात्र हैन विदेशको विभिन्न कुनासम्म पुगेर फिल्म छायांकन भइरहेका छन् । हिजो आज त फिल्मको केहि सिन मात्र हैन पुरा फिल्म नै विदेशमा खिच्न थालिएको छ । यो परिस्थिति हेर्दा हामी खुलेर भन्न सक्छौ, निर्माताहरु फिल्म मेकिङमा निकै ध्यान दिन थालेका छन् ।
तर, यस वर्षको फिल्म व्यापारलाई हेर्ने हो भने हामी उत्साहित हुनु पर्ने कुनै ठाउँ छैन । यस वर्ष प्रदर्शनमा आएका फिल्महरु एकाध बाहेक सबै असफल छन् । केहि फिल्मले मात्र लगानी उठाउन सकेका छन् । धेरै फिल्मका निर्माताले आफ्नो लगानीको केहि प्रतिशत पनि फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । यही सन्दर्भमा हामीले यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका केहीलाई दर्शक हलमा नआउने कारण के हुन सक्छ भनी प्रश्न गरेका थियौं ।
किन हलसम्म पुग्दैनन् दर्शक ?
प्रदीप भट्टराई – निर्देशक
“सबै निर्माताले फिल्म हिट हुन्छ भनेर नै निर्माण गरेका हुन्छन् । तर, दर्शक हलसम्म पुग्न छाडेका छन् । अहिले त हरेक मान्छेसँग समय कम छ । उनीहरु फिल्म हेरेर रिक्स लिन चाहन्नन् । दर्शक फ्रेश हुन फिल्म हेर्न जान्छन् । त्यो उनीहरुले पहिल्यै दिमागमा राखेका हुन्छन् । यसो हेर्दा हसाउने फिल्म चल्नुको कारण भनेको दर्शकलाई फ्रेश गराउने भएर हो जस्तो लाग्छ ।”
सुदर्शन थापा – निर्देशक
“फिल्म बनिरहेका छन् । रिलिज भइरहेका पनि छन् । तर किन चलेको छैन म आफैँले बुझ्न सकिरहेको छैन् । सायद धेरै फिल्म निर्माण भएका कारण पनि होला दर्शक अल्मलिनु भएको छ । हाम्रो क्षेत्रमा मेकरको स्टारडम पनि छैन । यो निर्माताले बनाएको फिल्म हेर्नु पर्छ भन्ने माहोल हामीले बनाउन सकेका छैनौं । हामीले दर्शकलाई राम्रो फिल्म दिने भन्दा पनि यही क्षेत्रमा काम गर्नेसँग इगो राखेर फिल्म बनाइरहेका छौं । यो त हाम्रो व्यापार हो । मिलेर राम्रो फिल्म बनाउने र दर्शक खुसी पारेर हामीले व्यापार गर्नु पर्छ । अर्को पाटो हेर्ने हो भने, हामीले फिल्मको ग्रेडिङ गर्न जरुरी छ । कुन फिल्मको स्तर कुन भनेर छुट्याउन नसक्दा पनि दर्शक हामीबाट निराश हुनुहुन्छ ।”
सुनिल कुमार थापा – निर्माता
“फिल्म हेर्ने दर्शक कम भएको हैन । हामीले दर्शकलाई राम्रो फिल्म बनाएर दिन सकेका छैनौं । राम्रो फिल्महरु चलिरहेका पनि छन् । कथा तथा पटकथामा हामी कमजोर भएका छौ । ट्रेलर र गीत राम्रो बनाएर फिल्मको कथा र पटकथामा ध्यान नदिदा दर्शकलाई झुक्काएर निराश बनाउने काम हामीबाट नै भएको छ ।”
प्रदीप कुमार उदय – अध्यक्ष, चलचित्र संघ
“आवश्यकता भन्दा बढि फिल्म बनेर पनि निर्माताहरु डुबिरहेको जस्तो लाग्छ । जस्तो पायो त्यस्तो कथामा फिल्म बनिरहेका छन् । कलाकारहरू जता त्यतै भेटिन थालेका छन् । अनावश्यक रूपमा कलाकार प्रविधिकको पारिश्रमिक बढेको छ । यस क्षेत्र नबुझि धेरैको प्रवेश भइरहेको छ । मनोरन्जनको साधनहरु पनि बढेका छन् । सायद यी र यस्तै कारणले होला फिल्मको व्यापार घटेको ।”
सन्तोष भण्डारी – नेपाली प्रबर्द्धक, अष्ट्रेलिया Ticketplus.com.au
“फिल्म निर्माणको संख्या बढे पनि फिल्मले आफ्नो सहि दर्शक पहिचान र राम्रो व्यापार गर्न सकेका छैनन् । यसको कारण के हो भन्दा हाम्रो निर्माताहरुले राम्रो कथाबस्तुलई ध्यान दिएर फिल्म नबनाउनु हो । बलियो कथाले नै धेरै दर्शक हालसम्म ल्याउँछ र लगानी फर्काउँछ । हलिउड तथा बलिउडमा जस्तो कथालाई लिएर हाम्रोमा काम भएको छैन् । नेपाली फिल्मले छायांकन, गीत संगीत तथा अभिनयमा ध्यान दिए पनि कथाबस्तुमा भने अझै सुधार ल्याएको छैन् । त्यसैले होला दर्शक हल सम्म नपुगेको ।”
कृष्ण भण्डारी – फिल्म सम्पादक
“हाम्रो फिल्मको क्वालिटीले दर्शकलाई तान्न सकेको छैन् । प्रविधिमा विकास भएपनि त्यसको सहि सदुपयोग भएको पनि छैन् । तर, प्रविधि राम्रो हुदैमा फिल्म चल्छ भन्ने पनि हुन्न । फिल्म चलनको लागि स्क्रिप नै मुख्य हो । राम्रो फिल्महरु चलेको उदाहरण पनि छन् । हामी स्क्रिप्ट मै चुकिरहेका छौ ।”
यसो भन्छन् रंग पत्रकार
“लगानी बढेको छ । फिल्म निर्माणको क्रम पनि बढेको छ । तर लगानी बढेसँगै त्यो लगानी रिकभर हुन नयाँ दर्शक बढ्नु पर्छ । तर हामीले दर्शक बढाउन सकेका छैनौं । हामीले फिल्मको प्रचार सामग्री पनि दमदार बनाउन सकेका छैनौं । र अर्को कुरा हामीलाई फिल्म राम्रो बनाउन भन्दा पनि छिटो बनाएर रिलिज गर्न हतार छ । कथाबस्तुमा मेहनत नपुग्दा दर्शक निराश भएका छन् । फिल्म राम्रो नभएर नै हो दर्शक हलमा आउन छाडेका”
लगानी बढाएर दर्शक हलमा आउने हैन । नयाँ लोकेशन, नयाँ कलाकारले दर्शक बढ्ने पनि हैन । दर्शक बढाउनको लागी हामीले फिल्मको कन्टेन्टमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यदि फिल्मको कथाबस्तुमा ध्यान दिने हो भने दर्शक खुसी पर्न सकिन्छ र फिल्म हेर्न दर्शक हालसम्म पुग्ने वातावरण बन्छ ।
“यस वर्ष हेर्दा नेपाली फिल्म मात्र हैन बलिउड फिल्महरु एकाध बाहेक चलेका छैनन् । नेपाली फिल्म नचल्नुको चाहिँ ३ वटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो त प्रचार कम हुन्छ, दोस्रो कलाकार सस्तो भएका छौं र तेस्रो फिल्म निर्माण धेरै भएका छन् । हामी आफ्नो फिल्मको भयंकर प्रचार भएको मान्छौ तर हाम्रो प्रचार हाम्रो सर्कलमा मात्र सिमित भएको अवस्था छ । दर्शकसम्म हाम्रो प्रचार पुगेको नै छैन् । अनि हाम्रो कलाकारहरु एकदमै सस्तो हुनुभयो । कलाकारको हरेक क्रियाकलाप सामाजिक संजलमा हुन्छ । दर्शक वाक्क भइसकेका छन् । कलाकारले दर्शकलाई प्रतीक्षा गराउन सकेका छैनौं । र अर्को कुरा भनेको फिल्म धेरै बनेका छन् । एक महिनामा ८ वटा फिल्म रिलिज हुँदा महिनामा १६ सय तिर्ने दर्शक यहाँ छैनन् । त्यसैले गर्दा नै फिल्म हेर्न दर्शक हलसम्म पुगेका छैनन् ।”
पछिल्लो समय मात्र हैन हरेक वर्षको नतिजा यस्तै नै छ । हाम्रोमा फिल्म निर्माण र प्रदर्शन एकदमै बढी भइरहेको छ । तर सफलता न्यून छ । यस्तो परिणाम नेपालमा मात्र हैन बाहिर पनि हुन्छ । हाम्रो मुख्य समस्या भनेको फिल्मले दर्शक लोभ्याउन नसक्नु वा कथाबस्तुमा बाध्न नसक्नु हो । राम्रो फिल्मको नतिजा राम्रो पनि आएको छ ।
२०७५ असोज १८ गते ९:२५ मा प्रकाशित
भ्वाइस अफ नेपालको नयाँ कोचमा राजेशपायल राई